पशुपन्छीसम्बन्धी समस्या छ ? अब हटलाइनबाटै लिनूस् निःशुल्क परामर्श | Vetkhabar
Home पशु र मानव पशुपन्छीसम्बन्धी समस्या छ ? अब हटलाइनबाटै लिनूस् निःशुल्क परामर्श
काठमाडौं । निषेधाज्ञाकै बीच पशुपन्छीसम्बन्धी कुनै समस्याले तपाईंलाई सताइरहेको छ ? यदि छ भने चिन्ता नगर्नूस । देशको जुनसुकै कुनाबाट अब तपाईंले टेलिफोनमार्फत निःशुल्क पशु स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन सक्नु हुनेछ ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभीए) ले निषेधाज्ञाको अवधिमा समस्यामा परेका कृषकहरूलाई निःशुल्क परामर्श सेवा दिन लागेको हो । त्यसका लागि उसले पैसा नलाग्ने हटलाइन ११५९ को व्यवस्था गरेको छ । जसबाट हप्तामा सातै दिन, चौबीसै घण्टा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
कोभिड महामारीमा पशुपन्छी कृषकहरूले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्न ४ अंकको निःशुल्क हटलाइन सेवा ०७८ जेठ २५ गते मंगलबारबाट सुरु गर्न लागेको एनभीएका अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार यो सेवा सातै दिन चौबीसै घण्टा निरन्तर पशु स्वास्थ्यकर्मीले उपलब्ध गराउनेछन् ।
यसका लागि एनभीएले निम्बस कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ । निम्बस नेपालमा पशुपन्छीको पेलेट दाना उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनी हो ।
अहिले नेपालमा ३० प्रतिशत किसानको मात्र पशु सेवामा पहुँच छ । एनभीएको यो सेवाले पशु सेवाको पहुँचबाट वञ्चित बहुसंख्यक नेपालीले लाभ लिनसक्नेछन् ।
एनभीएले महामारीका बेला कृषकहरूलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्षको लकडाउनमा पनि उसले प्रदेशमा रहेका आफ्ना संगठहरूमार्फत टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
एनभीएका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार, यो सेवालाई पनि एनभीएले भोलिबाटै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । देशभरिका करिब ३०० पशु चिकित्सकहरूले यो सेवा प्रवाह गर्नेछन् । त्यसका लागि उनीहरूको सम्पर्क नम्बर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । एनभीएका अनुसार टेलिलिमेडिसिन परामर्श सेवा आवश्यकता अनुसार भिडियो प्रविधिमार्फत पनि हुनेछ।
हटलाइन टोलफ्री नम्बरमा विभिन्न क्षेत्रमा पशुपन्छी उपचार सेवामा सक्रिय अनुभवी पशुचिकित्सहरूले सेवा प्रदान गर्नेछन् भने टेलिमेडिसिन परामर्शमा प्रादेशिक कमिटीसहितको व्यवस्थापनमा करिब ३०० पशु चिकित्सकहरूको सहभागिता रहनेछ ।
‘लकडाउनको अवधिमा कृषकहरु पशु चिकित्सककोमा पुग्न समस्या पर्ने र फिल्डमा नगई नहुने उपचारबाहेकका अन्य सामान्य परामर्श, घरेलु उपचार वा व्यवस्थापकीय पक्षमा प्राविधिक परामर्शले समेत कृषकको लागि फाइदा पुग्ने देखिन्छ,’ एनभीए अध्यक्ष श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, एनभीएले समग्र पशुपालकहरूमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न र प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्याउन टोलफ्री नम्बरबाट भेटेरिनरी टेली परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।’
यो वैज्ञानिक र नियमित उपचारको विकल्प नभएर आकस्मिक अवस्थामा कृषकहरुलाई घरेलु उपचारबारे जानकारी दिन, प्राथमिक उपचारबारे बताउन तथा नजिकको भेटेरिनरी सेवा प्रदायकसँग जोड्न सुरु गरिएको एनभीएले प्रष्ट पारेको छ ।
Previous articleकृषि मन्त्रालयले बुझ्यो पशु स्वास्थ्यकर्मीको मर्का
Next articleजसले निषेधाज्ञामा भरिरहेका छन् मानिसदेखि पशुसम्मको भोको पेट
जसले निषेधाज्ञामा भरिरहेका छन् मानिसदेखि पशुसम्मको भोको पेट
सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छु